ကဝိ ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
ကဝိ (သို့) ရှေးဂျာဗားသည် ဂျာဗားဘာသာစကား၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကိုယခု ဂျာဗားအလယ်ပိုင်း နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဂျာဗား တစ်ခုလုံး၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ စာပေဘာသာစကားအနေနှင့် ကဝိသည် ဂျာဗားတစ်လျှောက်နှင့် Madura ကျွန်း၊ ဘာလီ နှင့် Lombok ကျွန်းများပေါ်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုကဝိသည် သင်္သကရိုက် ဘာသာမှမွေးစားထားသည့် စကားလုံးဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိတော့ပေ။ ဤစာပေသည် ခေတ်သစ်ဂျာဗားစကားကို အထောက်အကူ ပြုပါသည်။
သင်္သကရိုက်ဘာသာမှ“ ကဝိ” ( ꦨꦴꦰꦏꦮꦶ ဘာၑါကဝိ) ဟူသောအမည်များကိုकवि ကဝိ "ကဗျာ" နှင့် 'ရှေးဂျာဗား' ကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ 'ရှေးဂျာဗား' ကိုခေတ်သစ်ဂျာဗားလူမျိုးတို့၏မျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသောသမိုင်းကြောင်းအရ ပြောဆိုခဲ့သည့် ဘာသာစကား အဖြစ် အသိမှတ်ပြု သုံးစွဲသည်။ ကဝိဟူသောအမည်ကို စံသတ်မှတ်ထားသည့် "ရှေးဂျာဗား"ဟူသည် အရေးအသား ပုံစံဖြင့်သာ ကန့်သတ်ထားသဖြင့် အချို့ စာပေများတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ပီတရက်စ် ဂျိုးဇက်ဖ် ဇူးအက်မာလတာရ်
↑ (2013) "ကဝိ", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
de Casparis, ဂျေ ။, အင်ဒိုနီးရှား Palaeography အင်ဒိုနီးရှား၌အစကတည်းကမှ c အထိ။ အေဒီ 1500, Leiden / Koln, 1975
ဖလော်ရီဒါ၊ နန်စီကေ၊ ဆူရာကာတာရှိဂျာဗားစာပေစာတမ်းများ - ကရာတိုတန်ဆူရာကာတာ၏နိဒါန်းနှင့်လက်ရေးမူ များ၊ အရှေ့တောင်အာရှကော်နဲလ် Univ၊ ၁၉၉၃ ISBN 0-87727-603-X
Wilhelm von Humboldt ၏ "Über die Kawi-Sprache ((Kawi Language On))" - ၁၈၃၆ အတွဲ ၁၊ အတွဲ ၂၊ အတွဲ ၃ ။
Poerbatjaraka dan Tardjan Hadiwidjaja, 1952, KepustWiki Djawa '။ ဂျေကာတာ / အမ်စတာဒမ်။
Avenir Stepanovich Teselkin၊ ဂျာဗားအို (Kawi) Ithaca, NY၊ Modern Indonesia Project, အရှေ့တောင်အာရှအစီအစဉ်၊ Cornell University, 1972
Teeuw, အေ နှင့် SO ရော့ဘ်ဆန်။ 2005 Bhomāntaka edited နှင့်ဘာသာပြန်ထားသော : Bhoma Leiden သေဆုံးခြင်း : KITLV Press, Series: Bibliotheca Indonesia; ၃၂ ။ ISBN 90-6718-253-2 ISBN 90-6718-253-2
EM Uhlenbeck, 1964, di dalam bukunya : "ဂျာဗားနှင့်မာဒူရာဘာသာစကားများအားလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခု"၊ The Hague: Martinus Nijhoff
Mary S. Zurbuchen၊ ဂျာဗားနီးယားဘာသာစကားနှင့်စာပေနိဒါန်း - Kawi Prose Anthology မီချီဂန်တက္ကသိုလ်၊ ၁၉၇၆
PJ Zoetmulder, SO Robson, Darusuprapta, ၁၉၉၅၊ Kamus Jawa Kuna - အင်ဒိုနီးရှား ၊ ဂျကာတာ - Gramedia dan Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) ။ SO Robson Bekerja sama dengan Penerjemah: Darusuprapta နှင့် Sumarti Suprayitna ။ ISBN 979-605-347-0 ISBN 979-605-347-0
1992-1993, Bahasa parwa : Tatabahasa Jawa Kuna: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press ။ Bekerja sama dengan IJ Poedjawijatna ။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်တတိယအကြိမ်မြောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
(in Dutch) Petrus Josephus Zoetmulder, 1950, De Taal van het Adiparwa, Bandung - Nix
Petrus Josephus Zoetmulder, 1982, Old Javanese - အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် ၊ The Hague: Martinus Nijhoff ။2v ။ (xxxi, 2368 p ။ SO Robson နှင့် ပူးပေါင်း၍) ။ ISBN 90-247-6178-6 ISBN 90-247-6178-6
(in အင်ဒိုနီးရှား) Petrus Josephus Zoetmulder၊ ၁၉၉၅၊ Kamus Jawa Kuna - အင်ဒိုနီးရှား SO Robson နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ ဘာသာပြန်သူများ၊ Darusuprapta, Sumarti Suprayitna ။ ဂျကာတာ: ရလဒ် Kerja sama Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.2v ။ ; 1. A-0, 2. PY ။
lontar (palmleaf စာမူများ) အကြောင်း။ ]
Old Javanese ၏ Zoetmulder အဘိဓာန်အဘိဓာန် ( SEAlang စာကြည့်တိုက် )
ဂျာဗား နီးယားကမ္ ပည်း စာများ ( SEAlang စာကြည့်တိုက် )
တိုကျိုနိုင်ငံခြားလေ့လာရေးတက္ကသိုလ်မှ ဂျာဗားနီးယား နိုင်ငံ၏ နိဒါန်း (ဝဘ်စာမျက်နှာသည်ဂျပန်ဘာသာဖြင့် pdf အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ရေးသည်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကဝိ_ဘာသာစကား&oldid=517575" မှ ရယူရန်
၂၉ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။